उपत्यकाका ९० प्रतिशत संक्रमित स्थानीय – NepalajaMedia
September 2, 2020 245
मंगलबार अबेर साँझसम्म उपत्यकामा ५ सय ६० जना संक्रमित फेला परेका छन् । नयाँ संक्रमितमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय छन्,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत उत्तमकुमार कोइरालाले भने ।
डा. पाण्डेले साउन ६ गते लकडाउन खुलेसँगै मानिसको गतिविधि बढेकाले अहिले असर देखिएको बताए । उनका अनुसार साउन ६ गतेपछि उपत्यकामा भित्रभित्रै संक्रमण व्यापक विस्तार भइरहेको थियो । जनस्वास्थ्यको न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरी बाहिर निस्किने जमातले संक्रमण चारैतिर तीव्र गतिले फैलिएको हो । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले हालै गरेको अवलोकन अध्ययनले काठमाडौंमा करिब ७० प्रतिशतले मास्क प्रयोग गरेको पाइएको थियो । त्यसमध्ये ७० प्रतिशतले मात्र राम्ररी मास्क लगाएका थिए ।
उपत्यकाका अस्पतालमा प्रसूति, शल्यक्रियालगायतका स्वास्थ्य समस्या भएर उपचारका लागि जानेहरूमा संक्रमण देखिएको डा. पाण्डेले बताए । उपत्यकामा सरदर करिब एक तिहाइ महिलामा संक्रमण देखिनुले संक्रमण समुदायतिर फैलिन लागेको संकेत गर्ने उनको भनाइ छ । हाल मुलुकभरका संक्रमितमध्ये ८० प्रतिशत पुरुष र २० प्रतिशत महिला छन् । ‘निषेधाज्ञामा कोभिड संक्रमण सार्ने १४ दिनको एउटा चक्र लगभग पूरा भयो । केही दिनपछि संक्रमण कम हुँदै गए लकडाउन अर्को मोडालिटीमा गर्न सकिन्छ,’ ईडीसीडीका निर्देशक डा. पाण्डेले भने ।
उनले संक्रमण रोक्न जनस्वास्थ्यको अधिकतम मापदण्ड उपत्यकावासीले कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हाल उपत्यकालगायत देशभरमा सबै व्यक्तिका लागि मास्कको अधिकतम र सही उपयोग संक्रमणको विस्तार रोक्ने पहिलो सर्त हो,’ उनले भने, ‘सही रूपमा मास्कको उपयोग, दुई मिटरको भौतिक दूरी, नियमित हातको सफाइ साबुनपानीले गरे मात्र हाल संक्रमणको सम्भावनालाई रोक्न सकिन्छ ।’ निषेधाज्ञा खुलिहाले पनि अनावश्यक रूपमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड नअपनाई घरबाहिर नहिँड्न उनले सुझाव दिए ।
हाल काठमाडौंमा ४ हजार ४ सय ८५, भक्तपुरमा ४ सय १० र ललितपुरमा ६ सय ६३ गरी उपत्यकामा ५ हजार ५ सय ५८ संक्रमित उपचाररत छन् । यस्तै उपत्यकाका अस्पतालहरूका आइसोलेसनमा १ हजार ३ सय ७५ जना, आईसीयूमा ६४ जना र भेन्टिलेटरमा १४ जना छन् ।
Prevभरतपुरमा इटालीको झल्को : जब केही घण्टाको फरकमा तीन संक्रमित ढले
Nextपुल्चोकमा ड्यूटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरी जवानमाथि निर्घात कुटपिट
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन,चैत ०५ गते बिहिबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
करोडौं ऋण लागेपछि सहयोगका लागी निस्किए धुर्मुस; मजदुरहरुले पैसा उठाएर बाटोखर्च दिँदा भावुक भएर रोए (भिडियो हेर्नुस्)